Hlanganisa i-Shopify ngaphandle komthungo NeSayithi Lakho Le-WordPress | Martech Zone
Hlanganisa i-Shopify ngokukhululekile neWebhusayithi yakho ye-WordPress
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 29, i-2016 ULwesine, April 28, 2016 Douglas Karr
Besilokhu sihlela amasayithi ambalwa weWoocommerce amaklayenti… futhi bekungelula. Isixhumi esibonakalayo seWoocommerce sincane futhi izici ezengeziwe zitholakala ngobuningi bama-plugins adinga okubhaliselwe okukhokhelwayo… nokuhlela okuningi. Kuningi okulungiselelwa.
Uma ungakaze ubone Thenga, sabelane ngevidiyo ekhombisa ukuthi ungayenza kanjani setha yonke indawo yakho ye-ecommerce ngaphansi kwemizuzu engama-25! AbakwaShopify basebenze kanzima kakhulu ukuhlinzeka ngesibonisi esisebenziseka kalula kubantu abangewona ama-web-savvy ukwethula isiza sabo bese beqala ngokuthengisa online.
Ukubona ukuthi kunezindawo ezingaphezu kwezigidi ezingama-60 ezakhiwe ku-WordPress yinto engeke yazitshwa. Futhi i-Shopify ayisayinaki - bakhiphe zombili izingqikithi ne-plugin elula ku hlanganisa indawo yakho ye-Shopify ngokukhululekile ne-WordPress.
Uma usuvele unesayithi elihle futhi ubheke nje ukuhlanganisa izinkinobho zomkhiqizo ukwengeza izinto enqoleni yokuthenga, i-Shopify ikhiphe i-plugin yamahhala esebenza nganoma yisiphi isayithi noma itimu.
I-plugin ye-WordPress ivumela abaphathi besayithi ukuthi baphonsa imikhiqizo ngezinkinobho zokuthenga kunoma iyiphi ibha eseceleni, ikhasi noma okuthunyelwe kwebhulogi. Lapho isivakashi sichofoza inkinobho, kuvela inqola yokuthenga ephuma kusayithi lakho futhi ivumela amakhasimende ukuthi athenge imikhiqizo eminingi ngasikhathi sinye.
Tags: thengainkinobho yokuthengaThenga izingqikithiWordPressukuhlanganiswa kwe-wordpress ecommerceukuhlanganiswa kwe-wordpress
Ungalithumela Kanjani Ifayela Elibuyekeziwe noma Elisha leRobots.txt
May 5, 2016 ku-12: 56 PM
Thenga ukuthi kupholile ngempela. Ngivivinye kwenye yamasayithi wami futhi isebenza kahle. Ngiyabonga!